अपि पावर कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २० जेठ २०७३)
गत आवमा रू. ५४ लाख ५३ हजार घाटामा रहेको कम्पनीको खुद नाफा २०७२/७३ आवको तेस्रो त्रैमासमा सुधारिएर रू. १ करोड ५३ लाख पुगेको छ । कम्पनीको गत चैतमा भएको साधारणसभाबाट १ः२ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । हकप्रद शेयर निष्कासनपछि चुक्तापूँजी बढेर रू. ३ अर्ब पुग्नेछ ।
आरएसआई : न्यूट्रल जोन (६४ दशमलव ७३ स्केल)मा छ । खरीद चाप बढेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : ३८ दशमलव १२ बिन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : २१ दिने औसत मूल्य रेखा र ७ दिने मूल्य रेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य ७ दिने रेखा, २१ दिने रेखा र ट्रेण्ड लाइनभन्दा माथि रहेको छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ७ सय ३९ मा टेवा र मूल्य महँगिएमा रू. ७ सय ६० मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।
कम्पनीको आव २०७१/७२ र आव २०७२/७३ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणबीच तुलना
- चैत मसान्तसम्ममा खुद नाफा रू. १ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । अन्य आय उच्च दरले र विद्युत् विक्रीबाट रू. ८ करोड ५१ लाख आम्दानी हुनाले खुद नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
- गत आवको सोही अवधिमा घाटामा रहेको जगेडा कोष सुधारिएर रू. १७ लाख ५७ हजार पुगेको छ ।
- कम्पनीको ऋण ६ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेर रू. ७५ करोड ७४ लाख पुगेको छ ।
- खुद चालू सम्पत्ति ५५ दशमलव ८० प्रतिशत घटेर रू. २२ करोड २७ लाखमा सीमित भएको छ ।
- प्रशासनिक खर्च ४ गुणा बढेर रू. १ करोड ८१ लाख पुगेको छ ।
- कुल आम्दानी उच्च दरले बढेर रू. ८ करोड ८३ लाख पुगेको छ ।
- वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले ८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको नौगाड लघु जलविद्युुत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेको छ । त्यस्तै ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड लघु जलविद्युुत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौतासमेत प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
- कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख भएअनुसार पीई रेशियो ४ सय २७ गुणा र प्रतिशेयर आम्दानी रू. १ दशमलव ५४ छ । हालको शेयर मूल्य नेटवर्थको ७ गुणा छ ।